ဆုတောင်းသည် အဓိကမဟုတ်ပါ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ရေးသားသူလှိုင်ကျော်ထွေး on မေ 19, 2011 at 5:08pm in ဆွေးနွေးခြင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွင်လည်း ဆုတောင်းခြင်း၊ တောင်းဆုပြုခြင်းကို အလေးထားကြ၏။ သြကာသ ကန်တော့ခန်းမှစ၍ သိရှိနိုင်ပါသည်..။အမှန်မှာ မိမိ၏လုပ်ရပ်ကသာ(မိမိပြုလုပ်သော ကံမြောက်မှု)ကသာ အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ဆုတောင်းသည် အဓိကမဟုတ်ပါ။</<span style="color: #FF00FF;">span>
Permalink Nyi Nyi Naing သည် မေ 20, 2011 12:34amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ မိမိအလုပ်ကိုဦးတည်ချက်လေးပေးပြီး ဆန္ဒပြုလိုက်တဲ.သဘောပါ။ပြည်.မပြည်. မသေချာပါဘူး။ပြည်.မပြည်.ဆုံးဖြတ်ပေးမှာကတော. လုပ်ရပ်က(အဓိက)ဖြစ်ပါတယ်။
Permalink ဦးခင် သည် ဖေဖော်ဝါရီ 4, 2012 12:20amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဆုတောင်းခြင်းသည် မိမိလိုချင်သော ဆန္ဒကို ဖော်ကျူးကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ အရိယာသူတော်စဉ်တို့သည် ပါရမီကို ဖြည့်ကျင့်ရ၏။ ထိုသို့ ဖြည့် ကျင့်ခြင်းနှင့်အတူ မိမိလုပ်ရပ်ကို သစ္စာဆို အဓိဌာန်ပြုရ၏။ ထိုသို့ သဘောကိုယူ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ကုသိုလ် ကောင်းမှု ပြုပြီးတိုင်း ဆန္ဒ ပြုဆုတောင်းပြီး အခြားသူများကို မျှဝေကြပေသည်။ မိမိတွင်သီလ၊သမာဓိ၊ ပညာမပြည့်စုံသေးခင်တော့ အကျိုး ဖြစ်ထွန်းမှု နည်းမည်ဆိုနိုင်သော် လည်း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာပြည့်စုံပါလျှင် ပြည့်ဝသည်နှင့်အမျှ အကျိုး ကျေးဇူးကြီးမားလေရာ အဆိုပါ ဆုတောင်းခြင်းကို စတင်ကိုးကွယ်ရာမှ နိစ္စ သဘောဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မျှခြင်းဟု မှတ်ယူသင့်ပေသည်။ အစပိုင်းဆုတောင်း သည် အကျိုးများချင်မှများပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ဖြစ်ခဲ့သည့်ဆန္ဒ ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် အကျိုးမများလှဟု မှတ်ယူနိုင်ပေမဲ့ မိမိပြုကျင့်သည့် သီလ သမာဓိ ပညာ ပြည့်ဝ ရင့်သန်မည် ဆိုလျှင် အခြားသူအပေါ် သာသနာပြုခြင်းဆိုသည့် လုပ်ရပ်တွင် များစွာ အထောက်အပံ့ပေးသည်မှာ ထင်ရှားလှပေကြောင်း သိမြင်ရပေမည်။
Permalink ♣တောသူမလေး♣ သည် ဖေဖော်ဝါရီ 7, 2012 1:14pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဆုတောင်းတာ ဆုမတောင်းတာထက် စိတ်ဆန္ဒကသာအဓိကပါ
ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲဖြစ်လို့ပါ
ဆုမတောင်းထားတဲ့အတွက် တစ်ဘုံဘုံမှာ ချမ်းသာတစ်ခုခုကို ပေးမှာပါပဲ
ကုသိုလ်ကောင်းမူပြုပြီးရင် ဆုတောင်းတာက ပိုကောင်းပါတယ်
ကောင်းမူပြုပြီးရင် ဆုတောင်းမှဖြစ်ချင်တဲ့ဘုံမှာ လိုချင်တဲ့ ချမ်းသာကို ရနိူင်လို့ပါ။
ဆုမတောင်းရင် ဒီကုသိုလ်ကြောင့် ဘာဖြစ်မယ်လို့ မသေချာဘူးပေါ့။
(ကတိမမြဲဘူး) လိုချင်တာတွေ ဆုတောင်းပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမူကို လက်တွေ့မလုပ်ပြန်ရင်လဲ ကောင်းတဲ့အတိုင်း မရလို့ပါ
ဒါကြောင့် ကုသိုလ်ကောင်းမူလဲ ပြုကြပါ နောက် ကုသိုလ်ပြုပြီးရင်လဲ မိမိလိုရာဆုကို တောင်းကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။